TARTANKA FASALKA "IRENE" - HORUMARINTA BEERALAYDA UKRAANIGA AH - MAQAALLO
Tartanka Fasalka "Irene" - Horumarinta Beeralayda Ukraaniga ah
Muddo 12 sano ah, shirkadda "Pure Product", oo ku salaysan gobolka Dnipropetrovsk, ayaa ku hawlan beerashada iyo iibinta toonta. Bilowgii beerta, khudaarta cagaaran waxay qabsadeen meel hektar ah, laakiin hadda shirkadu waxay ku koraan in ka badan 100 hektar oo dhul ah.
Sannadka 2018, Badeecada Pure waxay diiwaan gashan tahay noocyo kala duwan oo toon ah oo loo yaqaan Irene. Taas ka dib, dhismaha beeraha ayaa isbeddelay - shirkadda ayaa bilaabay toonta sii kordheysa qaybaha: hal nus ayaa loo iibiyaa, tan kalena waxa loo isticmaalaa sidii abuur. Tani waxa u sheegay Sergey Parashchenko, aasaasaha iyo madaxa "Qalabka Nadaafadda".
Goorta iyo sida loo soo saaro toonta jiilaalka ee Ukraine
Qaar ka mid ah codsiga toon: ka kooban iyo sifooyin faa'iido leh
Beeraleygu wuxuu ku doodayaa in "Irene" ay leedahay tiro ka mid ah faa'iidooyinka marka la barbardhigo chen ee noocyo kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah: iska caabinta heerkulka hooseeya, tayada dalagga, iska caabinta fayraska, miisaanka ugu dambeeya ee badeecada.
"Halkan waxaan ku qaadaynaa madaxa" Irene "ee gacanta, madaxa madaxa nooc kale oo toon ah, hal keli ah, hal garab, oo ku dhejiyo miisaanka, waxaa jira farqi u dhexeeya 20-25%, tani waa mid miisaan badan, marka lagu daro, marka aynu qaadno qiyaas ka weyn 4mm, in 10 ka mid ah noocyada qaar ka mid noqon doonaan wax ka yar 4mm + caliber ka badan 10kii Irene madaxa, labadaba miisaanka iyo tirada labadaba, Tani sidoo kale waa arrin aad u muhiim ah, sababtoo ah dhirta ayaa si joogto ah ugu jira wareegga nolosha firfircoon, ha ka badin "- ayaa leh beeralay-ganacsade.
Waxaan baraneynaa shuruudaha beertu
Goorta iyo sida loo soo saaro toonta jiilaalka ee Siberia: talooyin wax ku ool ah